अब बदलिन्छ यी ५ राशिको भाग्य : १२ वर्षपछि कुम्भ राशिमा गुरु बृहस्पतिको आगमन – List Khabar
आज रातिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ नियम लागू, के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ?
आजदेखि आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालय बन्द
जाने होईन त माल्टा ! तलब २ लाख ८२ ह’जारसम्म,सेवा शूल्क ४० हजार मात्रै, १२ पदका लागि ५८ जनाको माग
ह्वात्तै बढ्यो इसीडी, विद्या’लय कर्मचारी र लेखापालको तलब भत्ता ! कति पुग्यो ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ का शैक्षिक प्रमाणपत्र ११०० रुपै’याँमा विद्यालयले उपलब्ध गराउने
Home / समाचार / अब बदलिन्छ यी ५ राशिको भाग्य : १२ वर्षपछि कुम्भ राशिमा गुरु बृहस्पतिको आगमन
अब बदलिन्छ यी ५ राशिको भाग्य : १२ वर्षपछि कुम्भ राशिमा गुरु बृहस्पतिको आगमन
admin November 22, 2021 समाचार Leaveacomment 131 Views
खुसीको खबर ! अब ४० वर्ष कटेका पुरु”षलाई भत्ता।
बिल गेट्सको दावी : खोपले महिलामा बाँझोपन ल्याउने छ
धार्मिक व्यूरो । देव गुरु बृहस्पति आज कुम्भ राशिमा प्रवेश गरेका छन् । बृहस्पतिको यो परिवर्तनले केही राशिका लागि शुभ समय ल्याउने भएकाले केही राशिका व्यक्तिहरूलाई सावधान रहन सुझाव दिइएको छ ।
मेष, मिथुन, धनु, मकर र कुम्भ राशिका लागि लाभको संकेत रहेको छ । बृहस्पति अर्थात् बृहस्पति ग्रहले हाम्रो अनुभव, ज्ञान र हाम्रो लक्ष्यलाई विस्तार गर्दछ। बृहस्पतिले आशावाद, वृद्धि, उदारता र प्रचुरताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। बृहस्पति ग्रहलाई ‘गुरु’ ग्रहको दर्जा छ।
कुम्भ राशिमा निम्न राशिबाट पुग्छ
बृहस्पतिलाई धनु र मीन राशिको स्वामी मानिन्छ। कर्कट यस ग्रहको उच्च राशी हो भने मकर राशि दुर्बल राशि हो। ज्योतिष शास्त्रमा गुरुलाई ज्ञान, शिक्षक, शिक्षा, जेठा भाइ, सन्तान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, दान, पुण्य, धन र वृद्धि आदिको कारक मानिन्छ। बृहस्पति ग्रह २० नोभेम्बर २०२१ को बिहान ११ः२३ बजे कुम्भ राशिमा प्रवेश गरेको छ । यस ट्रान्जिटले सबै १२ राशिहरूलाई कसरी प्रभाव पार्छ भनेर हामी तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी दिँदैछौ ।
मेष : मेष राशिको चन्द्रमाको नवौं र बाह्रौं घरको स्वामी बृहस्पति हो। आम्दानी, नाफा र इच्छाको एघारौं घरमा संक्रान्ति भइरहेको छ । यस गोचरको अवधिमा मेष राशिका व्यक्तिहरूले आलस्य त्यागेर सक्रिय हुन थाल्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा, तपाईले यो ट्रान्जिटको समयमा विवाह, घर किन्नु वा घरमा सानो पाहुनाको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
वृष : बृहस्पति वृष राशीका लागि आठौं र एघारौं घरको स्वामी हो। करियर, नाम र कीर्तिको दशौं घरमा प्रवेश गर्दैछ ।
कार्यमा केही बाधा आउन सक्ने भएकाले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी नगर्नुहोस्। स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दा यो पारवहनमा यहाँका बासिन्दाले सानातिना स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । आर्थिक रूपमा यो ट्रान्जिटको समयमा कसैलाई पैसा नदिन सल्लाह दिइन्छ।
मिथुन : मिथुन राशिका लागि सातौं र दशौं घरको स्वामी बृहस्पति हो, जसले भाग्य र आध्यात्मिकताको नवौं घरमा गोचर गरिरहेको छ। सफल हुनको लागि सही मार्ग खोज्ने मानिसहरूले अन्ततः आफूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्नेछन्। ठूला लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र ती लक्ष्यहरूमा पुग्नको लागि पारवहन अवधि धेरै अनुकूल छ।
कर्कट : कर्कट राशिको लागि बृहस्पति ६ औं र ९ औं घरको स्वामी हो र ८ औं घरमा गोचर गर्दैछ, जसले अचानक हानि वा लाभ र उत्तराधिकारको नेतृत्व गर्दछ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट, तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने सानातिना स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगहरूले तपाईंलाई सताउन सक्छ। वर्षको सुरुवात अन्योल र जोखिमपूर्ण रहनेछ। यस कारणले गर्दा, तपाईंले अनावश्यक गल्तीहरू गर्नबाट जोगिनु पर्छ,किनकि तपाईंको खर्च बढ्न सक्छ।
तुला : तुला राशिको तेस्रो र छैटौं घरको स्वामी बृहस्पति हो, जसले प्रेम, रोमान्स र सन्तानको पाँचौं घरमा गोचर गर्दैछ। यो अवधि तपाईंको बच्चाहरु को लागि उपयुक्त छ। अर्कोतर्फ, विवाहितहरूले पनि यस समयमा सन्तान प्राप्त गर्न सक्छन्। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यो समय तपाईका लागि अनुकूल रहनेछ तर खानपानमा नियन्त्रण राख्नु होला ।
वृश्चिक : वृश्चिकका लागि बृहस्पति दोस्रो र पाँचौं घरको स्वामी हो र चौथो घर माता हो जसले आराम र विलासितामा यात्रा गरिरहेको छ। बृहस्पति कुम्भ राशिमा गोचर हुने भएकाले यस अवधिमा खर्च बढ्न सक्ने भएकाले आफ्नो आर्थिक नियन्त्रणमा लिनुपर्नेछ। यस अवधिमा तपाईले आफ्नो घरको नवीकरण र निर्माणको बारेमा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ।
धनु : धनु राशिका लागि बृहस्पति प्रथम र चौथो घरको स्वामी हो, जसले साहस, दाजुभाइ र यात्राको तेस्रो घरबाट पारगमन गरिरहेको छ। यदि तपाइँ नयाँ कामको खोजीमा हुनुहुन्छ वा नयाँ शहरमा जान चाहनुहुन्छ वा उच्च शिक्षाको लागि जान चाहनुहुन्छ भने, यो समय तपाइँको लागि अनुकूल हुनेछ। आर्थिक रूपमा तपाईको लागि आम्दानीको नयाँ बाटो खुल्ने संकेतहरू छन्, साथै तपाईले यस अवधिमा आफ्ना दाजुभाइलाई पूर्ण सहयोग दिनुहुनेछ।
मकर : मकर राशिका लागि, बृहस्पति तेस्रो र बाह्रौं घरको स्वामी हो, जसले आत्म र व्यक्तित्वको दोस्रो घरमा गोचर गर्दैछ। आर्थिक रूपमा विस्तार गर्न यो राम्रो समय हो, त्यसैले बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। केही भावनात्मक उथलपुथल र आफ्नो भावना व्यक्त गर्न कठिनाई हुन सक्छ, तर समय संग तपाईं यो समस्या परास्त गर्न सक्षम हुनेछ।
कुम्भ : कुम्भ राशिका लागि बृहस्पति दोस्रो र एघारौं घरको स्वामी हो र पहिलो घर र व्यक्तित्वमा नै गोचर गर्दैछ। यस ट्रान्जिटमा, यदि तपाइँ कसैसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाइँ वर्षको सुरुमा विशेष गरी मार्चसम्म व्यक्तिसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाइँको लागि धेरै लाभदायक हुनेछ। व्यक्तिगत रूपमा, नयाँ गतिविधिको सुरुवातहुनेछ। चैतपछि शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ । जागिर परिवर्तन गर्न, शहरहरू परिवर्तन गर्न र नयाँ व्यापारमा पैसा लगानी गर्न यो उत्कृष्ट समय हुनेछ।
मीन : मीन राशीका लागि बृहस्पति दशौं घर र प्रथम घरको स्वामी हो र हानि, वैदेशिक लाभ र मोक्षको बाह्रौं घरमा गोचर गर्दैछ। पेशागत रूपमा तपाईंले केही आरोपहरू र शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले तपाईंलाई यस अवधिमा सताउन सक्छ त्यसैले तपाईंको लागि कम प्रोफाइल राख्नु उत्तम हुनेछ।
Previous दुबईमा श्रमिक अभावपछी नेपालीको लागि खुल्ला गर्यो यस्ता भिसा..
Next फेवा किनारमा भिषण आ’गलागी
खुशिको खबर्: नेपालमा आज संक्रमित घटे नयाँ को-रोना संक्रमित, संक्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतमा ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि! (हेर्नुहाेस् विवरण सहित)
काठमाडौं । खुशिको खबर्: नेपालमा आज सं’क्रमित घटे नयाँ को-रोना सं’क्रमित, सं’क्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतमा ओमिक्रोन …
औषधिको पछाडि हुने गरेकाे रातो धर्काको अर्थ धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, थाहा नहुदाँ खतरनाक बन्नसक्छ !
माघ १० गते सोमवार, यस्तो छ तपाईको भाग्य